ညစ် ရင် … လေ ရင် … ဓါတ်ကျရင် … | Layma's World
Filed under:2in 1 style, Poem, Seasonal Post, That's what I wanna say |
« ဘက်မလိုက် အရောင် (Neutral color ) “လေးမ” … ရှင်းလင်းပွဲ(ပ) »
naing, on August 23, 2007 at 6:46 pm said:
သန့်ဇော်မင်း, on August 24, 2007 at 4:09 am said:
ဒါနဲ့စကားမစပ်.. ကျွန်တော်သာ မမလေးရဲ့ အိမ်က မောင်လေး အစစ်ဖြစ်ရင်.. နေတိုင်း မမလေးကို စိတ်ညစ်အောင်လုပ်မယ်။ ဒါမှ တအိမ်လုံး အမြဲရှင်းလင်းနေမှာ.. 😛
အ၀တ်တွေလည်း လျှော်စရာမလိုတော့ ဘူး.. ဟားဟား.. ပိုင်သကွာ…
ဂျစ်တူး - gyit_tu, on August 24, 2007 at 5:12 am said:
ဘုရင့်နောင်, on August 24, 2007 at 3:40 pm said:
လေးမ အ၀တ်တွေ တပုံကြီးလျှော်ရင်း ငိုချလိုက်တယ်ဆိုတော့ အ၀တ်ပုံကြီးလျှော်ရလို့နဲ့ တူတယ်။ 😛
hninhnin, on August 25, 2007 at 3:59 am said:
စိတ်ညစ်ရင် ကဗျာရေး…. စာရေး…. အတွေးတွေ မျှဝေပေးလို့ ရတယ်…..။ အရေးတွေ ကောင်းစရာမလိုဘူး…. အတွေးတွေလှစရာမလိုဘူး….. အေးအေးဆေးဆေး ဒိုင်ယာရီရေးသလို ရေးချင်တာတွေသာရေး…. ဘာမှတွေးမနေနဲ့ …. စိတ်ရှိသလိုသာရေး….. မကျေနပ်လို့အော်သွားတဲ့သူရှိရင်လဲ ငြိမ်ခံနေလိုက်…….။ မငြိမ်ချင်ရင် ပြန်အော်လိုက်….။
ဂျယ်ရီ, on August 25, 2007 at 4:31 am said:
“ခက်တာက ကာတွန်းတိုင်းသည် ဟာသမဟုတ်…..ရယ်စရာမကောင်း.”
“သီချင်းဆိုတာ အပေါက်တစ်ပေါက်ပဲ…. ၀င်ပေါက်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်….. ထွက်ပေါက်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်..”
ဟုတ်ကဲ့ ။ ဘာတွေဝင်လာပြီး ဘာတွေထွက်သွားလဲလို့ စောင့်မကြည့်တော့ဘူး ။ warm,wide,wild …… လွှတ်ထားပေးလိုက်မယ်။
ပေါ့သွားရောလား ။ အင်း …… ကြိတ်ငိုစရာရှိရင်တော့ အိပ်ယာဝင်တတ်ကြတယ် ။
blog ကလည်း ထွက်ပေါက် တစ်ခု ၊ တံခါးတစ်ချပ်ပဲလား ။ ၀င်ပြီးရင် ပြန်မထွက်နိုင်မှာစိုးလို့ မလုပ်တော့ဘူး ။ သူများတွေကိုပဲ လိုက်ဖတ်နေတော့မယ် ။ 😛
enics, on August 25, 2007 at 12:49 pm said:
Layma, on August 25, 2007 at 1:55 pm said:
ဝေလေး, on July 16, 2008 at 4:28 pm said:
စိတ်ညစ်ရင် ကဗျာရေး…. စာရေး…. အတွေးတွေ မျှဝေပေးလို့ ရတယ်…..။ အရေးတွေ ကောင်းစရာမလိုဘူး…. အတွေးတွေလှစရာမလိုဘူး….. အေးအေးဆေးဆေး ဒိုင်ယာရီရေးသလို ရေးချင်တာတွေသာရေး….
လိမ္မာတယ်ဆို မုန့်တွေတစ်ယောက်တည်းမစားနဲ့နော်…..သိလား………..ဟဲ ဟဲ……..:P
layma-layma, on January 29, 2009 at 6:47 pm said:
ဝေလေး.. လိမ္မာတယ်ပြောပြီး မုန့် စားချင်တဲ့ သူပေါ့လေ..။